I-Blue Lakehouse ye-4 p. (i-sauna, i-kayak, isikhephe, i-SUP)
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJustine
Indlu yolwandle yolwandle emnandi epholileyo ibekwe ecaleni kwechibi laseJanowskie ePoland. Sibonelela ngendawo yokuhlala (umgangatho ophantsi kunye nomgangatho wokuqala- 40 m2) ukuya kuthi ga kubantu aba-4. Ixhotyiswe ngebhedi yobukhulu bokumkani kunye nesofa esongwayo ekhululekileyo. I-balcony-loggia njengokwandiswa kwegumbi lokuhlala liyakwamkela ngombono omkhulu wehlathi le-birch kunye nechibi. Ipropati (5400 m2) enonxweme oluyi-100m ene-kayak, iibhayisekile, intenetya yetafile, i-stand up paddling kunye ne-firepit yangaphandle-ishiya akukho mnqweno ungafezekanga.
Icala lechibi, elinenqanaba lokumisa, yindawo yokuzonwabisa kunye nokuphumla okanye indawo yokuqala ukhenketho ngephenyane okanye isikhephe.
Kwi-sorroundings kukho isikolo sokukhwela (eGleboczek), iindawo zokutyela ezahlukeneyo, iindlela zebhayisekile ezingaqhelekanga, ipleyiti yechibi laseBrodnicki, ababoneleli abahlukeneyo be-kayaksport, amahlathi e-Brodnicki nature reserve - ukuphumla okucocekileyo!
w w w. b l u e -l a k e h o u s e . c o m
Umbuki zindwendwe ngu- Justine
Siyathemba ukuba uya kuba nexesha ongalibalekiyo ngelixa uhlala nathi. Ukuba ufuna naluphi na ulwazi olongezelelweyo, nceda usazise. Siya kukuvuyela ukukunceda ngeyona ndlela ilungileyo.
Ungasoloko undithumelela iSMS, i-imeyile okanye unditsalele umnxeba.
Kwimeko yongxamiseko (ukuba asikho eJanowko) ndingathumela umgcini-ndlu wethu, osaziyo isiNgesi.
Ngolwazi oluthe vetshe nceda uye kwiwebhusayithi yethu:
Siyathemba ukuba uya kuba nexesha ongalibalekiyo ngelixa uhlala nathi. Ukuba ufuna naluphi na ulwazi olongezelelweyo, nceda usazise. Siya kukuvuyela ukukunceda ngeyona ndlela ilung…
Iilwimi: English, Deutsch, Italiano, Polski
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brodnica County